उम्मेद्वार - प्रकाश शरण महत
प्रकाश शरण महत नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ ५
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतको जन्म २०१६ सालमा नुवाकोटमा भएको हो । डा. महतले नेविसंघको महामन्त्री, सात पार्टीको वार्ता कमिटी सदस्य, परराष्ट्र राज्यमन्त्री, उर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ । उहाँको राजनीतिक यात्रा २०३६ सालदेखि सुरु भएको हो । उहाँले विद्यार्थी जीवनमा नै राजनीति थाल्नुभएको थियो । राजनीतिक गर्ने क्रममा उहाँ पटक पटक पक्राउ पर्नुभएको छ । दुई सन्तानका पिता डा. महतले अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गर्नुभएको छ । उहाँ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग अत्यन्तै निकट मानिनुहुन्छ । दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिकबाट सभासद भएका महत संविधान लेखनका समयमा संवैधानिक मस्यौदा समितिका सदस्यका रुपमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो । रुपान्तरित संसदमा उहाँ कृषि तथा जल स्रोत समितिका सदस्य हुनुहुन्थ्यो । १५ वर्षअघि सात महिनाका लागि महत राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुनुभएको थियो ।